» काठमाडौं उपत्यकामा खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागूः के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ? (सुचिसहित)
काठमाडौं उपत्यकामा खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागूः के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ? (सुचिसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका लागि केही खुकुलो बनाएर १० दिन थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट शुरु भएको छ । जेठ १४ गतेदेखि किराना पसलहरु समेत बन्द गरेर एक साताका लागि कडा निषेधाज्ञा गरिएकोमा आजदेखि भने केही सेवा चल्न दिनेगरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा प्रधान कार्यालय र ३ वटा शाखा वाणिज्य बैंकले, विकास बैंकले प्रधान कार्यालय र २ वटा शाखा, वित्त कम्पनीले प्रधान कार्यालय र एक वटा शाखा खेलेर सेवा दिन पाउने भएका छन् ।
अत्यावश्य बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र बिमा लगायतका कार्यालयको सेवा प्रवाह हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
नयाँ ब्यवस्थासहित जेठ ३१ गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न पसलदेखि मोटरसाइकल वर्कसपसम्मका केही सेवाहरुलाई भने खुला गरिएको हो । जसअनुसार आजदेखि बिहान नौ बजेसम्म वर्कसप पनि खोल्न पाइने भएको छ ।